I-Lenten Appetizers kwi-Cooky Busy
Unqulo & Umoya Ukuphila Ubomi bamaKatolika
Ukukhawuleza, ukuzonwabisa, kunye nokutya
IziLwesihlanu ezingenakusihlwa, ngexesha loLent okanye lonke unyaka, zingenza umngeni wokupheka. Zonke ezi zokupheka ezibhenkisayo ziyi-free-free and easy to prepare. Basebenzise ukuba bongeze ukuphakama okuncinane kwidlo yakho yokungadli inyama kwi- Ash ngoLwesithathu , iiLanga zesiLente kunye neLwesihlanu unyaka wonke. Zonke iiresiphi zivela kuLinda Larsen, Isikhokelo se-About.com se-Cooky Cooks.
Unokufumana ezinye iindlela zokupheka ezingenanjongo kwiLenten Recipes .
UJon Sullivan / iWindows Domain
Nangona la ma-firecrackers amancinci ukwenza lula, awanalo ukuphelelwa yintliziyo. Ukuba uthanda ukushisa okuncinci, kunjalo, unokwenza i-batch kabini kwezi ngaphambili kwaye ushitshise i-extras. Musa ukucima abo uceba ukukhenkceza, nangona kunjalo.
Juanmonino / Getty Izithombe
I-Quesadillas - iifotjhila ezimbini ezigutywe ngeeshizi kunye nezinye izizaliso phakathi - zikhawuleza, zizonwabe, ziyathandwa kwaye ziyazaliswa. Abantwana bakuthanda ngakumbi. Iresiphi esheshayo kodwa enhle kakhulu yindlela efanelekileyo yokweba isipinashi kwisondlo sabo.
Ian O'Leary / Getty Izithombe
Enye indlela yokunciphisa ixesha lokulungiselela isidlo sakho kunye nesabelomali sokutya kukusebenzisa izinto onokuthi uzilahle. Iipatato zeembotyi ziyimzekelo epheleleyo, kwaye akukho nto ingaba yinto elula, ekhawulezayo, okanye engabizi ngaphezu kwalesi sitishi.
4kodiak / Getty Izithombe
Ukuba uthanda igalikhi, uya kuthanda igalikhi egalelweyo. I-pulp e-sweet caramelizeded ye-clove egacekileyo i-clove ine-flavored garlic eluhlaza kwaye ayikho inzondo. Nangona le recipe idinga ixesha elincinci lokupasa, igalikhi kufuneka igcobe ngeyure, ngoko ayikho into yokwenza ngomzuzu wokugqibela. Kodwa unako ukugcoba igalikhi kusengaphambili uze uyigcine kwisiqandisini. Ukusasazeka kwintlanzi esonyiweyo isonka esithandekayo.
RBOZUK / Getty Izithombe
Le recipe igqibelele njengendawo yokutya okanye ihlaziye kunye nesibheno. Unokwenza kwangaphambili kwaye uyisebenzise kulo lonke veki. Ngelixa ungadla ama-mushroom ngqo kwiqrijini, i-flavour of the spices izakubizwa ngakumbi xa uvumela ama-mushroom ukuba afike kwiqondo lokushisa ngaphambi kokuba akhonze.
Iimpephelo ezingenakusiza zeLente kunye Nonyaka
Humanae Vitae noPapa Paul VI
Funda iMithetho yokuzila ukutya
Xa iChrism Falls ngoLwesihlanu, Ngaba amaKatolika angadla inyama?
Ngaba ikhona "indlela efanelekileyo" yokwenza uphawu loMnqamlezo?
Uvavanyo lwe-ABA-Applied Behavior Analysis
Ngaba Iifom zeGazethi zeNgcaciso zeFom yeComputer?
UkuVotelwa kweMigaqo yokuFunyezwa kwabangaphambukeli